कथा – सल्लेरी बजारको | साहित्य संगालो २०१३
कथा – सल्लेरी बजारको
Posted on July 14, 2017 by भण्डारी2013
सल्लेरीको माथितिर पातलो दमै बस्ती छ । १५–२० घर होलान् दमैहरू । बजार छेउछाउमा भने बाहुनहरूको बाक्लो बस्ती छ । सल्लेरी पुरानो बजार हैन । भर्खर विस्तार हुँदै गरेको बजार हो । विदेशी सहयोगमा मोटर बाटो खुलेपछि सल्लेरी गाउँले बजारको रूप लिएको हो । त्यसले सल्लेरी बजारको अनुहार नै फेरिदियो ।
बाटोको छेउतिर टक्राकटुक्रुक दोकान उभिए । बजार खुलेपछि नजिकैका बाहुनहरूले बाटोछेउ घर बनाउन थाले । बजारभन्दा केही माथि रहेका दमैहरूको घर–घडेरी बाटो छेउमा नपरेकाले उनीहरू जहाँकोत्यहीँ भए ।
पैसा हुने बाहुनहरूले बाटोछेउमा पिल्लर ठड्याउन थाले । पैसा नहुनेहरूले जसोतसो माटोकै भए पनि घर बनाउने सुर कसे ।
पण्डित हरिद्वारले पनि बाटोछेवैको घडेरीमा पिल्लरसहितको तीनतले घर उभ्याए । पण्डित हरिद्वारको खास नाम कृष्णप्रसाद हो । उनले हरिद्वारबाट आचार्य गरेका थिए । उनका हरेक गफमा हरिद्वारको कुरो आउँथ्यो । गफले दिक्क स्थानीयहरूले उनको नामै हरिद्वार राखिदिए । त्यसपछि सल्लेरी बजारमा उनको नाम हरिद्वारले प्रख्यात भयो ।
हरिद्वारका दाजु थिए । उनी बजारछेउ सरे पनि दाजुले पैसा कमाउन नसकेकाले जहाँको त्यहीँ बस्नुप¥यो । घर नभए पनि भाइको सँगै जोडिएको घडेरी थियो । अंश भागमा पाएको । खासमा पैसा भएको भए पनि भाइको घरछेउ उनलाई बस्ने मनै थिएन । अंश मुद्दामा ठाकठुक परेपछि बोलचाल बन्द भएको थियो ।
बोलचाल नभएको भाइको घरछेउको घडेरी राखिराख्न मन लागेन । भाइको मेख मार्नकै लागि बेचिदिए– कान्छो दमैलाई । चलनचल्तीको भन्दा झन्डै दोब्बर मूल्यमा । कान्छो दमै घडेरीको दोब्बर मूल्य तिर्नुपर्दा पनि दुःखी थिएन । खुसी थियो । उसलाई वरपरका बाहुनहरूले छिमेकमा दमै आउने भयो भनेर घडेरी नै दिँदैनथे । दाजुभाइको झगडाले गर्दा घडेरी पाएको उसलाई राम्रोसँग थाहा थियो ।
घडेरी किनेको छ महिनापछि कान्छो दमैले सटर राखेर एक तले पिल्लरवाला घर बनायो । बजारभरिमा सटर भएको पहिलो घर उसकै भयो । कान्छो दमै अरुभन्दा गरिखाने दमै थियो । साहै्र मेहनेती । हातमा सीप थियो, घरको सटरमा टेलर खोल्यो । आफ्नै घरको सटरमा टेलर खोलेपछि भने कान्छो दमैप्रति वरिपरिका बाहुनहरूले टाउको दुखाए– छिमेकमा अछुत जात आयो भनेर । सबैभन्दा बढी पण्डित हरिद्वारको टाउको रन्कियो । रिस फेर्न छिमेकमा अछुत दमै हुलेकोमा दाजुप्रति रिस देखाए । झिँगाको सरापले डिँगो मर्दैन भनेझैं दाजुले वास्तै गरेनन् ।
कान्छो दमैको टेलर भने खाली भएन । दिनहुँ व्यस्त भयो । घडेरी किनेपछि पटक–पटक ‘बाहुनको बीचमा बस्न सक्दैनस् बेच्’ भनेका थिए, पण्डित हरिद्वारले । बल्लबल्ल पाएको घडेरी बेचेन । अहिले टेलर चल्दा कान्छो मख्ख छ ।
पण्डित हरिद्वारकी जेठी छोरी माइतै बस्थी । उसको नाम थियो सावित्री । बिहे गरेको छ महिना नपुग्दै लोग्नेले छाडिदिएछ । पण्डितसँग रिस उठेकाहरूले उसको चरित्रमा शंका गर्थे । पण्डितसँग राम्रो भएकाहरूले केटो नै उस्तो भन्थे । खास के हो, अरु कसैलाई थाहा थिएन । कि सावित्रीलाई थाहा थियो कि दैवलाई । एक साँझ, सावित्री कुर्था सिलाउन कान्छो दमैको टेलरमा पुगी । कान्छो लुगा सिलाउँदै थियो । उठेर सावित्रीको चोलाको नाप लिन थाल्यो । कान्छोले पाखुराको लम्बाइको नाप लिएपछि कम्बरको नाप लियो । छातीको नाप लिने बेला सावित्रीले कान्छाको गाला चिमोटिदिई । कान्छो झसंग भयो र सावित्रीको अनुहारमा हे¥यो ।
कान्छोकी स्वास्नी त्यही दिन माइत गएकी थिई । के भन्ने कसो गर्ने, कान्छो आत्तियो । कुर्थाको नाप लिँदालिँदै रोकिएको कान्छोलाई च्याप्पै समाई सावित्रीले । कान्छो हल न चल भयो । गँगटोले च्यापेको माछाको भुराजस्तो । ऊ असिनपसिन भयो । के बोल्नु, के बोल्नु– अलमलियो । चाहेर पनि बोल्न सकेन । सावित्री भने हनहनी ज्वरो आएझैं तातेकी थिई । “छि ! छाडिदेऊ बजै !!” ओठ–मुख सुकेको कान्छो बल्लतल्ल बोल्न सक्यो । साँझ परेकाले कान्छाको टेलरभित्र अँध्यारो बढ्दै गएको थियो । घुर्मैलो उज्यालो थियो । पण्डित हरिद्वारले बाहिरैबाट देखेछन् । ढोकासम्म आएर ठम्याए । कुरो प्रस्ट भएपछि बाहिर निस्केर कराउन थाले ।
“गुहार ! गुहार !!”
“ए ! गुहार ! गुहार !!”
वरपरबाट दौडादौड गरेर केही मान्छे भेला भए । सल्लेरी बजार कान्छाको टेलरअगाडि जम्मा भयो । त्यतिबेलासम्म सावित्री टेलरबाट बाहिर निस्किसकेकी थिई । कान्छो भने डर र लाजले चाउरिएर भित्रको भित्रै थियो । जम्मा भएकाहरूलाई पण्डितले सरासर भने, “मेरी छोरीलाई कान्छोले समायो ।” “के बलात्कार ….?” सावित्रीलाई परेको आपतमा स्याल ठिटाहरू झन्डै बाघ भएर गर्जिए, जो सावित्रीलाई असाध्यै माया गर्थे । बाबुको अगाडि आफैं समाएको कसरी भनोस्, सावित्रीले कान्छोले समाएकै हो भनिदिई । लाज र डरले भन्दा चोखो बन्न ऊ रुन थालेकी थिई ।
हुल्याहा केटाहरू सटरभित्र छिरेर कान्छोलाई घिसार्दै बाहिर ल्याए । रिसको झोंकमा पाक्कपुक्क हाने । कसैले लात्तले, कसैले मुड्कीले । कान्छाको नाथ्री फुटेर रगत बग्यो । रगत देखेपछि सबै रोकिए । कान्छाले लगाएको कपडा च्यातचुत भएछ । हुलिया केटाहरूले टेलरभित्रको सामान बाहिर ल्याएर मिल्काइदिएछन् । त्यो देखेर उसलाई पिटेभन्दा बढी दुख्यो । कसलाई के पो भन्नु ! आफ्नो कन्तबिजोक शरीर जता छोए पनि दुख्ने भएको थियो । त्यतिबेलासम्म झमक्क साँझ परिसकेको थियो । निसाफ भोलि छिन्ने निष्कर्षमा सबै आ–आफ्नो बाटो लागे । घाइते भएको कान्छो भने डरले थर्रर काँप्दै थियो । बोल्न सकेको थिएन ।
भोलिपल्ट सल्लेरी बजार ढाकेर समाज बस्यो । घाइते कान्छाको मुख गहुँको रोटीझैं भुक्क उक्सिएछ । त्यो बजारले कान्छाको चिनामा बलात्कारी लेखिसकेको थियो । कान्छालाई कसैले कठै भनेनन् । उसको आफ्नै दाँतले जिब्रो टोकेर बोली लर्बरिने भएछ । बिचरो नाके डाँडी स्टिलको भाँडोझैं कुच्चिएछ । निलै भएछ । कसैले सोधेन यो हालत कसरी भयो भनेर । सबैले उही सोधे, “सावित्रीलाई किन बलात्कार गरिस् ?” उसले धुरुधुरु रोएर भन्यो, “म परिबन्दमा परें ।” तर, उसको त्यो बोली कसैले सुनेन । बरु उसैले सुन्यो, कसैले पाता फर्काउनुपर्छ भनेको, कसैले डाँडो कटाउनुपर्छ भनेको, कसैले जेल कोच्नुपर्छ भनेको । कान्छोले स्पष्टीकरण दिने मौकै पाएन । सबैले होहल्लामात्र गरे । ठोक्नुपर्छ, त्यतिकै छाड्नु हुँदैन भने । कसलाई भनोस् आफ्नो यथार्थ ?
कुटाइले उसका आँखा सुनिनमात्र बाँकी थियो । त्यो पनि सुनियो । लुगा सिलाउन जानेजस्तो कुरा सिलाउन जानेको भए बिचरोले यो दुःख पाउँदैनथ्यो । तर, जानेन । रडाको नसकिँदै माइत गएकी कान्छाकी स्वास्नी आइपुगी । कुरो बुझेर ऊ झन्डै बेहोस भइन । उसले रुँदै पण्डित हरिद्वारका खुट्टामा टाउको बिसाएर भनी, “पण्डित बा ! एकपटकलाई माफी पाऊँ । यो लाटाले जे गर्नु गरिगो ।” कान्छो दमैकी स्वास्नीको नाम हो हीरा दमिनी । नामले मात्र हीरा हैन, अनुहार र शरीरले पनि ऊ हीरा नै हो । दमिनी भएरमात्रै घाटामा परी नत्र धनीकी बुहारी हुन्थी ।
हिराको कुरो पण्डितले पटक्कै सुनेनन् । ऊ धरधरी रोएकी थिई खुट्टा समाएर । पण्डितले वास्ता गरेनन् । कुरो टुंगोमा नपुगी सल्लेरी बजारको रमिता अन्त्य भयो । यसमा सबैको एउटै मत थियो । कान्छालाई कारबाही दह्रो हुनैपर्छ । गाउँमा चेलीबेटी जोगाउन गाह्रो भो । त्यो दिन त्यसै बित्यो ।
भोलिपल्ट पण्डित हरिद्वारले कान्छो दमैलाई अदालतमा मुद्दा लाएर आए । यो कुरो खरबारीको डढेलोझैं सल्लेरी बजार फैलियो । जता गयो, उही कुरा । बलात्कारीलाई त्यत्तिकै छोड्नु हुँदैन– सबैको मत एउटै भयो ।
कान्छोले पढेको थिएन । ८ कक्षा पढ्दापढ्दै छाडेको थियो । पण्डित हरिद्वारले मुद्दा दिएपछि ऊ आत्तिएर अब के हुने हो, धेरैलाई सोध्यो । कोहीले के भने, कोहीले के । सबैको एउटा कुरोचाहिँ मिल्यो, कानुनका नौ सिङ हुन्छन् । सबैले उही कुरो भन्दा कान्छो सोच्थ्यो– नौ सिङ भएको कानुनले हानेरै मार्ने भो !
कान्छो दुई–तीन दिनसम्म के–के सोचेर तड्पिँदै बस्यो । भेट्ने जति सबैले एउटै भाका भन्थे, “बेकार झेलखानामा कोचिने भइस् । बलात्कारको मुद्दाले त मान्छे त झेलखाना पर्छपर्छ, सम्पत्ति पनि स्वाहा हुन्छ ।” हितैषी दमैहरूले पनि उसका अगाडि दया देखाउन थाले । “बज्जे सोझो थिइस् । जाली बाहुनको फेला परिस् । कोखमा दाँत हुनेको केही भर हुँदैन । अब के पो हुने हो ! जान्नेहरू जीवनभर जेल बस्नुपर्छ भन्छन् ।”
केही दिनपछि कान्छो कसैको कुरा सुन्न नसक्ने भयो । बिहान पीपलको बोटमा पासो लगाएर झुन्डिएको भेटियो ।
सल्लेरी बजारको पूर्वपट्टि टिनले छाएको निम्न माध्यमिक विद्यालय छ । विद्यालयका हेडसर हुन् रामहरि शर्मा । रामहरि शर्मा सहयोगी थिए । सबैलाई सहयोग गर्थे । आपत परेकाहरूलाई सहयोग गर्नु उनी आफ्नो धर्म सम्झिन्थे । गाउँको विकास र प्रगतिका निम्ति रामहरि शर्मा जिउज्यानले लागिपर्थे । उनको सहयोग नभएको भए आजसम्म सल्लेरीको बाटोमा मोटर चल्दैनथ्यो । उनी विद्यालयका मास्टरमात्र थिएनन्, सामाजिक कार्यकर्तासमेत थिए । कान्छो दमैलाई परेको आपतमा एक–दुईले साथ दिएका थिए । त्यसमध्ये उनी एक थिए, जसले गर्दा बजारका धेरैले उनको कुरो काटे ।
डुम हेड सर !
नामै फेरिदिए ।
उनले त्यस्ता आलोचनाको मतलबै नगरी कान्छोलाई सहयोग गर्छु भनेका थिए । ‘नडरा, म छु’ भनेथे । तर, कान्छोले उनको कुरा पत्याइदिएन । पत्याओस् पनि कसरी ! सबै ‘कानुनका नौ सिङ हुन्छन्, तँ फन्दामा परिस्’ भनेर अत्याउँथे । जीवनभर जेल बस्नुपर्छ भने । सहन नसकेर आत्महत्या ग¥यो । रामहरि शर्मा निडर थिए । द्वन्द्वकालमा पनि उनी कसैसँग डराउँदैनथे । गल्ती हुनेहरूलाई ठाडै तेरो गल्ती हो भनिदिन्थे । उनका अगाडि गल्ती गर्ने हिम्मत कसैले गर्दैनथ्यो ।
सामान्यभन्दा केही अग्ला कदका रामहरि शर्मा केही पर्दा प्रस्ट विचार राख्थे । त्यसैले होला– सल्लेरी बजारमा उनको नाम छुट्नु सम्भव थिएन । त्यस्ता असल व्यक्ति रामहरि शर्मा अचानक हराए । सामान्य बिरामी भएर अस्पताल गएका फर्किएनन् । कता गए, कहाँ गए– घरपरिवारमा कसैलाई थाहा भएन । एक बिहान उनी सल्लेरी बजारको पीपलको बोटमा झुन्डिरहेको अवस्थामा फेला परे । उनको मृत्यमा सल्लेरी बजारले आँसु झा¥यो । केही महिनासम्म सल्लेरी बजारमा उनको मृत्युबारे विभिन्न टीकाटिप्पणी चले । हेडसर रामहरि शर्माको मृत्युबारे सबैले आ–आफ्नै अड्कल लगाउँथे तर सत्य कसैलाई थाहा थिएन । सल्लेरी बजार आफैं अड्कल काट्थ्यो र आफैं हैन भन्थ्यो ।
सल्लेरी बजारका अर्का हर्ताकर्ता व्यक्ति हुन्, रामदेव पाण्डे । उनी स्थानीय नेता थिए । उनको पहुँच केन्द्रीय राजनीतिसम्म थियो । मन्त्री÷प्रधानमन्त्रीसँग सिधै भेट्न सक्ने हैसियतका थिए उनी । गरिबहरूको सत्ता ल्याउनुपर्छ भन्ने रामदेव पाण्डे गरिबहरूको हितका लागि जे पनि गर्छु भन्थे । गरेका पनि थिए । कान्छो दमैको आत्महत्यापछि उनले पण्डित हरिद्वारलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्दै हिँडे । यो कुरो सल्लेरी बजारको तात्तातो समाचार बन्यो । साँझ सल्लेरी बजारमा चिया खाएर गफ गर्नेहरूका लागि यो विषय गफको मेलो थियो । चिया खाएर उग्राउने मेलो ।
रामदेव पाण्डेले मुद्दा हाल्छु भनेर हो या केही कारणले पण्डित हरिद्वार बिरामी परे । मेडिकलको औषधिले उनको व्यथा निको भएन । सधैं रुघाखोकी लाग्ने । त्यसमाथि दम बढ्दै गएपछि उनी सदरमुकाम पुगे, स्वास्थ्य जाँच गर्न । पण्डित हरिद्वार स्वाथ्य जाँच गर्न सदरमुकाम गए पनि सल्लेरी बजारले कुरो अर्कै बुझ्यो । नेता रामदेव पाण्डेले मुद्दा हालेकाले तारिख धाउन गएको हल्ला चल्यो । नेता रामदेव पाण्डेले मुद्दा हाले/हालेनन् कसैलाई थाहा थिएन । पण्डित हरिद्वार सदरमुकामबाट स्वाथ्य जाँच गरेर फर्किएको भोलिपल्ट सल्लेरी बजारमा अर्को अचम्म भयो ! पण्डित हरिद्वारले सल्लेरी बजारको नजीकमा रहेको पीपलको बोटमा झुन्डिएर आत्महत्या गरेछन् ।
त्यस दिनदेखि सल्लेरी बजार झन्–झन् रहस्यमय बन्दै गयो । सल्लेरी बजारकामात्र हैन, यो खबर सुनेकाहरूले पनि सल्लेरी बजारको पीपलको रुख हेर्न सकेनन् । सल्लेरी बजारका स्थानीयहरूले सल्लाह गरे । यो अचम्म के भयो ? तर, कसैले पनि यसै भयो भन्न सकेनन् । कान्छो दमै मरेको सात महिना नपुग्दै पण्डित हरिद्वारले त्यही रुखमा झुन्डिएर आत्महत्या गरेपछि धार्मिकहरूले देवी–देउता बौलाएको शंका गरे । धूपधुवार गरे ।
करिब दुई वर्षपछि ! सल्लेरी बजारमा नेता रामदेव पाण्डेको पहलमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरिएको थियो । त्यो विशाल स्वाथ्य शिविरमा सल्लेरी बजारका सम्पूर्णले स्वाथ्य परीक्षण गराए । बच्चादेखि वृद्धसम्म । स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्ट हप्तादिनपछि आउने भयो । त्यसको जिम्मा लिए नेता रामदेव पाण्डेले । तर, हप्ता दिनपछि सल्लेरीमा चमत्कार भयो ! सल्लेरी बजार नजिकैको पीपलको रुखमुनि जम्मा भयो । पीपलको रुखमा स्थानीय नेता रामदेव पाण्डेले पासो लगाएर आत्महत्या गरेछन् !
प्रभावशाली नेताको आत्महत्या सानो कुरा थिएन । डरले सल्लेरी बजार काम्यो । उनको पार्टी प्रतिपक्षमा थियो । पार्टीले स्वतन्त्र छानबिन गर्न सरकारसमक्ष जोडदार माग ग¥यो । जनता जोगाउन नसक्ने प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागियो । गृहमन्त्रीविरुद्ध चर्का नारा लागे ।
विपक्षीको मागअनुसार सरकारले छानबिन गर्न प्रहरी प्रशासनलाई पठायो । प्रहरी प्रशासनले नेताको मृत शरीरलाई पीपल रुखबाट झा¥यो र मृत नेताको शरीर जाँच ग¥यो ।
मृत नेताको गोजीमा एउटा रिपोर्ट रहेछ, जुन रिपोर्ट हप्ता दिनअघि भएको स्वास्थ्य शिविरमा स्वाथ्य परीक्षण गराएकाहरूको थियो । प्रहरीहरूले खोलेर हेरे । रिपोर्टअनुसार सल्लेरी बजारका स्थानीयमध्ये आधाभन्दा बढीलाई एड्स रहेछ ! रिपोर्टको पुछारमा अर्को अचम्मको कुरा के थियो भने हीरा दमिनी गर्भवती थिई । प्रहरी प्रशासनले हीरालाई सोधपुछ सुरु ग¥यो । हीराले धेरै झन्झट दिइन । उसले सजिलैसँग आफ्नो गर्भमा रहेको शिशुको बाबु चिनाइदिई । नाम लिँदा पण्डित हरिद्वार, हेडसर रामहरि शर्मा, नेता रामदेव पाण्डेको नाम छुटाइन । हतारमा अन्य १५–२० जनाको नाम सम्झिन भ्याई । त्यस दिनदेखि त्यो अनाम सल्लेरी बजार मसानघाटजस्तै भयो ।
(यो कथा नेपालको गत शनिबार प्रकाशित ‘रित्तो आकाश’ कथा संग्रहबाट लिइएको हो ।)
This entry was posted in Nepali Stories and tagged Deepak Nepal, Nepali Literature, Nepali Stories, Salleri Bazaarko, Story by भण्डारी2013. Bookmark the permalink.